အော်တိုထုပ်ပိုးစက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - တရုတ်အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးစက်ထုတ်လုပ်သူများ
ကော်ဖီဆေးတောင့် dolce gusto nespresso cartoning စက်လက်ဝှေ့စက်
NO ၁။ စက်ပစ္စည်းနိဒါန်းစက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ rolled film + sheet film linear model ဖြစ်ပြီးမြန်ပြီးတည်ငြိမ်သည်။ တစ်နာရီလျှင် ၃၀၀၀-၃၆၀၀ တောင့်များဖြည့်နိုင်သည်။ ခွက်အမျိုးမျိုးဖြည့်နိုင်သည်။ ± 0.3 ဂရမ်။ ထုတ်ကုန်၏ကျန်ရှိသောအောက်စီဂျင်သည် ၅% အထိရောက်ရှိနိုင်စေရန်နိုက်ထရိုဂျင်ဖြည့်ခြင်းဖြင့်ကော်ဖီ၏သက်တမ်းကိုတိုးစေနိုင်သည်။ စက်စနစ်တစ်ခုလုံးသည် Schneider ကို အခြေခံ၍ IoT နည်းပညာဖြင့်ကွန်ပျူတာ / ဆဲလ်ဖုန်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
အလိုအလျောက်စိုစွတ်သော Wipes ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Z80-5 အလိုအလျောက်ကလေးစိုစွတ်သောတစ်ရှူးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း wet စိုစွတ်သောထုပ်များကို ၃၀-၁၂၀ ထုပ်ပိုးရန်အတွက်သင့်တော်သည်) ၁။ ပစ္စည်းကိရိယာ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ 1. အသုံးပြုမှုအကွာအဝေး: 30-120 ကိုအပိုင်းပိုင်း / အိတ်။ ကလေးစိုစွတ်သောအစုပ်စက်များ၊ စက်မှုစိုစွတ်သောသုတ်များ၊ ၂။ အလုပ်လုပ်သောနိယာမ - (၁ ခုစာကျွေးခြင်း→အွန်လိုင်းဖြတ်ခြင်း→အလိုအလျောက်ခေါက်→အလိုအလျောက်အရည်ဖြည့်ခြင်း→အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း→အလိုအလျောက်ထုပ်ခြင်း - အလိုအလျောက်ရေတွက်ခြင်း) →စိုစွတ်သောသုတ်များစောင့်ဆိုင်း။ ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး→ (...
ထုပ်ပိုးမှု ၁ ခုအတွက်စက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုအလိုအလျောက်စိုစွတ်သော wipes များ
I. ပစ္စည်းကိရိယာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ 1. ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များ: ဒီပစ္စည်းကိရိယာများ spunlace အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်; လေပူထည်၊ ဖုန်မှုန့်ကင်းသောစက္ကူနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ 2. ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အလုပ်လုပ်နိယာမ: သယ်ဆောင်→အလိုအလျှောက် longitudinal ခေါက်→ကုန်ကြမ်းဖြတ်တောက်ခြင်း→အလျားလိုက်ခေါက်→ထုပ်ပိုး→အရေအတွက်အရည်အဆာ→ပုံနှိပ်ခြင်းနေ့စွဲ→အပ်ချုပ်→အလိုအလျောက်ပြီးစီး။ ၃။ ပစ္စည်းကိရိယာသည်စိုစွတ်သောသုတ်များကိုထုပ်ပိုးရန်အတွက်သင့်တော်သည်။
၎င်းသည် Nespresso၊ K-cups၊ dolce Guesto၊ Lavazza ကော်ဖီဆေးတောင့်များစသည်တို့အတွက်သင့်လျော်သည်။
၎င်းသည် Nespresso၊ K-cups၊ dolce Guesto, Lavazza ဆေးတောင့်များအတွက်သင့်လျော်သည်။
Guesto Lavazza ကော်ဖီဆေးတောင့် Nespresso K-cups